Barruu jiraataa dirqaalee hin filatamne mara waliin fooyeessuuf yeroo filtu, hanga ammaatti haalatoonni keewwata " Dur fili" gara haalatoota "qaama Barruu" tti jijjiiramuu danda'a.
Erga iddoo adii rakiisaa(iddoo caancala, ykn iddootti deebisuu) booda barruun bakka bu'uu danda'a . Gabatee armaan gadii keessatti Afi B barruu qubewwan A hanga Z of keessatti hammamtaa ykn kurnyeewwan 0 hanga 9 bakka bu'a.
Iddoowwanii fi caancalawwan bakka dhuma fi jalqaba sararawwaniitti haqi.
Malattoo - lakkoofsa kennuu fayyadami
Yeroo arfiilee murtaa'aa sadii fi isaa ol barreessitu, handaara ofumaan ka'uumsa keewwata duraatti fayyada, ittaansudhaan Galchi dhiibi. Sararaa baaqqee uumuuf, murfissa(-) sadii fi isaa ol ykn murgadiiwwan (_), barreessi ittaansuudhaan mallattoo walqixaa(=) gadii fi isaa ol urjoowwan(*) daldufawwan(~), ykn mallattoowwan hash? (#) barreessi, ittaansuudhaan Galchii dhiibi
Jalmura dachaa qabxii o.5
Jalmura dachaa qabxii 1.1
Jalmura dachaa qabxii 4.5
Jalmura dachaa qabxii 6.0
Jalmura dachaa qabxii 9.0
Haalata keewwata "Durtii" Mataduure 1 waliin hanga haalatoota keewwata mataduree 8 tti ofumaan bakka buusa. Haalata keewwata mataduree 1 fayyadamuf, barruu akka mataduree (tuqaadhaan ala) fayydamu barbaadde barreessi, ittaansuudhaan Enter si'a lama dhibi. Mataduree xiqqaa fayyadamuuf, Tab si'a tokko ykn isaa ol dhiibi, barruu (tuqaadhaan ala) barreessii, ittaansuudhaa Galchii dhiibi.
Haalatoota keewwata maammiloo galmee ammee keessaa haalata keewwata "Durtii" "Qaama Barruu" ykn "Galumsa Qaama Barruu" waliin bakka buusa.
Keewwatoota murfisa (-), mallatoo ida'uu (+) ykn urjoo (*) waliin jalqabanii kallattiidhaan iddoo ykn caancalaan hordofaman gara tarreewwan rasaasa'eetti jijjjira. Dirqalli kun keewwata "Durtii", "Qaama Barruu" ykn Galumsa Qaama Barruu waliin dhanga'an irratti qofa dalaga. Haalata rasaasa fayyade jijjiiruuf, dirqala kana fili, ittaansuudhaan Gulaalii cuqaasi.
Yoo dheerinni ... ol ta'e keewwatoota sarara baaqqee waliin maki